Warar - Aan-tolmo lahayn: Dharka Mustaqbalka!
Nadiifiyeyaasha Qalalan ee Aan Laheyn
Masaxada Qalalan ee Qasacda
Nadiifinta Nadiifinta Guryaha
Nadiifinta Nadiifinta Warshadaha
2cm Cadka Cadka Tifaftirayaasha Cadka
4.5cm DIA Tuwaalka Tifaftirayaasha
Maaskaro wajiga oo la isku cufay
Shukumaanada Shaqsiyadeed ee La Tuuri Karo
Tuwaalka Bath La Tuuri Karo
Tuwaalka Timaha La Tuuri Karo
Tuwaallo qallalan oo waji ah
Maskaxda Ka Saarida Qurxinta
Shukumaanka Roll Beauty
Aan-tolmo lahayn: Dharka loogu talagalay Mustaqbalka!
Ereyga nonwoven macnaheedu ma aha "tolmo" ama "tolmo", laakiin dharka ayaa aad uga badan. Aan tolmo lahayn waa qaab-dhismeed dhar ah oo si toos ah looga soo saaro fiilooyinka iyada oo la isku xidhayo ama la isku xidhayo ama labadaba. Ma lahan qaab dhismeed joomatari oo abaabulan, halkii ay ka dhalan lahayd xiriirka ka dhexeeya hal fiber iyo mid kale. Xididdada dhabta ah ee nonwovens waxaa laga yaabaa inaysan caddeyn laakiin ereyga "dhar aan labisnayn" waxaa la sameeyay 1942 waxaana laga soo saaray Mareykanka.
Dhar aan tolmo lahayn ayaa lagu sameeyaa 2 habab oo waaweyn: waa la jajabiyaa ama way isku xidhan yihiin. Mashiinka la miiray ee aan tolnayn ayaa lagu soo saaray iyadoo la isku darayo go'yaal khafiif ah, ka dibna la marinayo kuleylka, qoyaanka & cadaadiska si loo yareeyo & loo duuduubo fiilooyinka maro cufan oo dufan leh oo aan ka xumaan doonin ama ka murgi doonin. Mar labaad waxaa jira 3 habab oo waaweyn oo wax soo saar ah oo isku xidhan dhar aan tolmo lahayn: Qallalan Laid, Qoyan Laydh & Wareejin Toos ah. Nidaamka waxsoosaarka Maqaarka ee aan-xidhka lahayn ee qallalan, shabakad fiilooyin ah ayaa la dhigaa durbaan iyo hawo kulul ayaa lagu duraa si ay isugu xidhaan fiilooyinka. Nidaamka waxsoosaarka dharka ee aan qoyan-qoyan, shabakad fiilooyin ah ayaa lagu qasan yahay dareeraha jilciya kaas oo sii deynaya walax u eg xabagta oo isku xira fiilooyinka kadibna webka ayaa la dhigaa si loo qalajiyo. Nidaamka waxsoosaarka Dharka ee Tooska ah ee miiqan, fiilooyinka waxaa lagu miiqaa suunka wax lagu xambaaro guluubyadana waxaa lagu buufiyaa fiilooyinka, ka dibna lagu dhejiyaa isku xidhka. (Xaaladaha fiilooyinka kuleylka leh, koolo looma baahna.)
Waxyaabaha aan la Goyn
Meel kasta oo aad fadhiisato ama aad taagan tahay hadda, kaliya fiiri hareeraha iyo si dhakhso leh waxaad ka heli doontaa ugu yaraan hal dhar aan dun lahayn. Dhar aan tolmo lahayn ayaa dhex gala suuqyo badan oo ay ka mid yihiin caafimaadka, dharka, baabuurta, sifeynta, dhismaha, geotextiles iyo difaac. Maalinba maalinta ka dambaysa adeegsiga dharka aan dunta lahayn ayaa sii kordhaya iyaga la'aantoodna nolosheena maanta waxay noqonaysaa mid aan la fahmi karin. Asal ahaan waxaa jira 2 nooc oo dhar ah oo aan gogol lahayn: Waara & Qashinka. Qiyaastii 60% dharka aan la tolan karin ayaa waaraya inta soo hartayna 40% waa qashin.
Hal-abuurnimo yar oo ka timaadda Warshadaha aan tolnayn:
Warshadaha aan tolnayn ayaa had iyo jeer lagu hodansiiyaa waqti u baahan tabo cusub tanina waxay sidoo kale gacan ka geysaneysaa horumarinta ganacsiyada.
Maqaarka dusha sare (Machadka Nowovens Innovation & Research- NIRI): Waa albaabka bakteeriyada lidka ku ah ee riixaya suufka & gacmaha jiidaya kuwaas oo loo farsameeyay inay dilaan jeermiska iyo bakteeriyada keydka ah ilbiriqsiyaadka muhiimka ah, inta udhaxeysa hal isticmaale iyo midka xiga ee ka soo galaya albaabka. Sidaas awgeed waxay ka caawineysaa ka hortagga faafitaanka jeermiska iyo bakteeriyada dadka isticmaala.
Reicofil 5 (Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG): Teknoolojiyaddani waxay soo bandhigtaa tiknoolajiyada khadka ugu wax soo saar badan, la isku halleyn karo oo wax ku ool ah taas oo yareysa jajabyada adag boqolkiiba 90; wuxuu kordhiyaa wax soo saarka illaa 1200 m / min; wuxuu hagaajiyaa waqtiga dayactirka; wuxuu yareeyaa isticmaalka tamarta.
Dib-u-habeyn ™ Xarunta Hernia Patch (Shanghai Pine & Power Biotech): Waa balastar nano-balastar elektaroonig ah oo aad u qiimo badan oo wax ku ool ah kana faa'iideysan kara isla markaana u adeegta sidii heer korriin loogu talagalay unugyada cusub, ugu dambaynna sii noolaanshaha; yareynta heerka dhibaatooyinka qalliinka kadib.
Joogitaanka ku dhowaad muddo aan kala go 'lahayn oo koritaan ah 50kii sano ee la soo dhaafay, nonwoven waxay noqon kartaa qaybta qorrax ka soo baxa ee warshadaha dharka adduunka oo leh faa'iido ka sarreysa alaabooyinka kale ee dharka. Suuqa caalamiga ah ee dharka aan dunta lahayn waxaa hogaamiya Shiinaha oo leh saamiga suuqa ku dhowaad 35%, waxaa ku soo xiga Yurub oo leh suuq ku dhow 25%. Ciyaartoyda hormoodka ka ah warshadan waa AVINTIV, Freudenberg, DuPont iyo Ahlstrom, halkaasoo AVINTIV ay tahay soo saaraha ugu weyn, iyadoo leh saamiga suuqa wax soosaarka qiyaastii 7%.
Waqtiyadii ugu dambeeyay, markii ay soo if baxeen kiisaska COVIC-19, baahida loo qabo nadaafadda & alaabada caafimaad ee ka sameysan dharka aan la tolan (sida: koofiyadaha qalliinka, maaskarada qalliinka, PPE, daboolka caafimaadka, kabaha daboolan iwm) ayaa kordhay illaa 10x illaa 30x dalal kala duwan.
Sida laga soo xigtay warbixin ka socota dukaanka cilmi baarista ugu weyn adduunka "Cilmi baarista & Suuqyada", Suuqa Caalamiga ah ee nonwoven Fabrics ayaa lagu qiyaasay $ 44.37 sanadka 2017 waxaana la filayaa inuu gaaro $ 98.78 bilyan 2026, oo ku koraya CAGR 9.3% inta lagu jiro muddada saadaasha. Sidoo kale waxaa loo maleynayaa in suuqa waara ee aan tolmo wanaagsaneyn uu ku kori doono heerka CAGR ee sareeya.
Maxaa loo Xidhay?
Nonwovens waa hal-abuur, hal-abuur, wax-ku-ool ah, tikniyoolajiyad sare, la-qabsan kara, muhiim ah oo kala-bixi kara. Dharka noocan ah waxaa si toos ah looga soo saaraa fiilooyinka. Markaa looma baahna tillaabooyin diyaarinta dunta ah. Habka wax soo saarku waa mid gaaban oo fudud. Halkee laga soo saarayaa 5,00,000 oo mitir oo dhar ah, waxay qaadataa qiyaastii 6 bilood (2 bil loogu talagalay diyaarinta dunta, 3 bilood oo lagu tolo 50 gogol, 1 bil dhammaystirka & kormeerka), waxay qaadataa 2 bilood oo keliya in la soo saaro tiro isku mid ah dhar aan tolmo wanaagsan lahayn. Sidaa darteed, halka heerka waxsoosaarka dharka la tolay uu yahay 1 mete / daqiiqad iyo heerka soosaarka dharka la tolay waa 2 mitir / daqiiqad, laakiin heerka wax soo saarka dharka aan tolnayn ayaa ah 100 mitir / daqiiqo. Intaa waxaa sii dheer qiimaha wax soo saarku wuu hooseeyaa. Ka sokow, dharka aan labisnayn ee soo bandhigaya waxyaabo gaar ah sida xoog sare, neefsashada, nuugista, adkeysiga, miisaanka fudud, ololka dib u dhaca ah, tuurista iwm.
Dhar aan tolmo lahayn ayaa inta badan la sheegaa inuu yahay mustaqbalka warshadaha dharka maadaama dalabkooda & kala duwanaanshahoodu ay sii kordhayaan oo ay sii kordhayaan uun.
Waqtiga boostada: Mar-16-2021
HANGZHOU LINAN HUASHENG DAILY NILAASHOOYINKA CO., LTD